Tsy fandriampahalemana eto Toamasina
Fanafihana mitam-piadiana misesy 12-13 mai
Tao anatin’izany i Rasta, ny talata 13 mai, jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana eto Toamasina. Nisy ary ny fifandonan’izy ireo tamin’ny mpitandro filaminana tao Bazary kely ka tapitra tamin’izany ny ain’i Rasta sy ny fanaovana asa ratsiny, saika hanohitra kanjo voatifitry; rehefa avy nandroba tranombarotra tao Ankirihiry ity jiolahy ity sy ny namany.
Efa ela nikarohana ity jiolahy ity ary efa maro ny fanafihana mitam-piadiana nataony sy ny namany mialoha izao nahafaty azy izao, araka ny fanazavana voaray avy amin’ny polisy.
Tsy mandry fahalemana intsony ny eto Toamasina amin’izao
Ny Alatsinainy, 12 mai 2014, fanafihana mitam-piadiana miisa telo no indray niseho tao anatin’ny iray andro. Voalohany tamin’izany, lasibatry ny jiolahy ny tranombarotra lehibe iray tetsy Bazaribe ka lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny lelavola mitentina 100 000 000 Ariary. Voalazan’ireo niharam-boina fa jiolahy miisa efatra nitondra basy P.A sy Kalachnikov no tompon’antoka tamin’ny fanafihana. Tsy nanampo rahateo ireo niharan’ny fanafihana fa nihevitra ireo jiolahy ho mpividy entana tamin’io fotoana io. Ny basy efa nirangaranga no nampikoropaka ny olona tao amin’ilay fivarotana.
Mbola andron’ny alatsinainy, 12 mai ihany, mpivarotra fahana finday tao Tanambao V no nidiran’ny jiolahy nirongo basy an-keriny ihany koa. Vola mitentina 600 000 Ariary no lasan’izy ireo nandritra ny fanafihana.
Ary ny hariva tokony ho tamin’ny 6 ora, tranombarotra tao Tanamakoa no norobain’ny jiolahy nitondra basy. Vola 1 200 000 Ariary indray no lasan’izy ireo.
Mitovy ny paika fanafihan’ireo jiolahy, rah any filazan’ireo niharam-boina tamin’ireo tranombarotra voatafika: misy mandrahona amin’ny basy, ary mandraoka ny entana sy ny volabe ao amin’ny fitoerany ny sasany, ary nandositra tamin’ny m�t� ireo jiolahy rehefa avy nanatanteraka ny asa ratsiny.
Velon-taraina ary anisan’ny mampikaikaika ny mponina eto Toamasina ity resaka tsy fandriampahalemana ity. Misy ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana eto an-toerana amin’ny famongorana ireo jiolahy, saingy vao mainka mihamitombo hatrany izy ireo. Ahina ho faritra mena ity renivohitra ara-ek�n�mika eto Mdagasikara ity raha tsy voafehy ao anatin’ny fotoana fohy ny tsy fandriampahalemana.
Kidnapping, fanolanana, vonoan’olona, fanafihana mitam-piadiana, fitsaram-bahoaka… izany no mampalaza ity renivohitry Betsimisaraka ity. Manginy fotsiny ireo sahona misy poizina “radaka voay” manampy trotraka ny fahasahiranam-bahoaka izay iaraha-mahita.
(44) Erino RAZAFIMANANA : 15-05-2014 - 08:00